Richa Naidu (Reuters)
Impossible Foods Inc. on January6launchedaplant-based sausage patty that will be tested in 139 Burger King restaurants later this month, enteringacategory dominated by rival Beyond Meat.
Pork has been the world’s most consumed meat for the past four decades, according to the U.S. Department of Agriculture. Impossible Foods also announced another imitation ground pork product on January 6, but did not disclose details about where it would be produced or sold.
Los Angeles-based Beyond Meat has used imitation pork, chicken and beef to create products for major fast-food chains including burgers for McDonald’s, sausage patties for Dunkin Brands and chicken for Yum Brands Inc.’s KFC chain.
Impossible Foods Inc သည် Burger King စားသောက်ဆိုင် ၁၃၉ ခုတွင် စမ်းသပ် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် သစ်သီးသစ်ရွက်အခြေပြု sausage pattyကို ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် Burger King စာသောက်ဆိုင်များတွင် Whopper patties များသွင်းနေသေည့် Silicon Valley အခြေစိုက် Impossible Foods က Springfield၊ Illinois ၊ Albuquerque၊ New Mexico အပါအဝင်နယ်မြေငါးခုတွင် Impossible Sausage များကို မိတ်ဆက်စမ်းသပ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။ ဝက်သားတုဝက်အူချောင်းကိုလည်း Impossible Croissan’witch ဟူသော စားစရာတွင် ကြက်ဥ၊ ဒိန်ခဲတို့နှင့် ရောလျက် ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်အတွင်း ဝက်သားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စားသုံးမှုအများဆုံး အသားဖြစ်လာကြောင်း အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ Impossible Foods သည် အခြားသော ဝက်သားတုစားသောက်ကုန်တစ်ခုကိုလည်း ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သို့သော် မည်သည့်နေရာတွင် ထုတ်လုပ်မည်၊ မည်သည့်နေရာတွင် ရောင်းချမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကိုတော့ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပေ။
ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးသော အသားမဲ့ ဘာဂါကို စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက စားသောက်ကုန်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရောင်းချသည့် အပေါ် လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဝေဖန်အကြံပြုနေကြသည်။
Lost Angeles အခြေစိုက် Beyond Meat ကတော့ ဝက်သားတု၊ ကြက်သားတု၊ အမဲသားတု့တို့ကို အသုံးပြုလျက် Mc Donald’s အတွက် ဘာဂါ၊ Dunkin Brnads အတွက် sausage patty နှင့် KFC အတွက် ကြက်သားတို့ကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။
SourceRicha Naidu (Reuters)
Previous articleTesla Reports Record Output as Musk Delivers on Broader Goal
Next articleThousands on Strike over Pay at Cambodian Casino